Dani Alves oo 300 Daawo ah ugu deeqay dadka Bolivia ee qaba cudurka caabuqa Beerka – Gool FM
Dani Alves oo 300 Daawo ah ugu deeqay dadka Bolivia ee qaba cudurka caabuqa Beerka
(Turin) 31 Luuliyo 2016 – Laacibkii hore ee kooxda Barcelona, haatanna u ciyaara naadiga Juventus Dani Alves ayaa isu xilqaamay in uu caawiyo dadka la il daran xanuunka Caabuqa Beerka ee ‘Hepatitis C’ ee ku nool waddanka Bolivia.
Alves ayaa ku biiray Ololaha lagu cirib tirayo Virus-ka Cudurkan halista ah, waxaana uu daawada cudurkaasi oo dhan 300 uu ugu deeqay dadkaasi dhiban een awood u haysan in ay iibsadaan daawadaasi qaaliga ah.
Ciyaaryahan Alves oo isku dayaya in uu badbaadiyo dadkaasi jirran ayaa waxa uu sheegay in 600 oo qofood oo reer Bolivia ah ay qabaan cudurkaasi, kuwaasoo u badan dad aan iibsan karin dawooyinka lagu dabiibo cudurkaasi.
“Haddii aan Naf badbaadiyo waan ku farxi lahaa sida aan haatanba u faraxsanahay” ayuu yiri Alves.
Daawada Caabuqa Beerka ee uu ku deeqay Alves dadka reer Bolivia ayaa waxay kala yihiin Sofosbuvir iyo Daclatasvir kuwaasoo qaali ah, qiimo ahaanna daawada halkii qof loogu talo galay 12 usbuuc ayaa waxaa lagu qiimeeyaa 84,000 Dollar.
Xanuunka Caabuqa Beerka ayaa waxaa la ildaran ku dhowaad 170 Milyan oo qof Caalamka oo idil.
Kaddib Ibrahimovic oo xalay dhaliyey goolkiisii 1-aad, wax ka baro xiddigaha reer Sweden ee u soo ciyaaray kooxda Man United
WARBIXIN: Weeraryahannadii ugu xumaa ee ay kooxda Barcelona soo iibsatay, misna ku khasaartay 10-kii sano ee la soo dhaafay + Sawirro